Sports | Somalia News
Ururka Daacish oo ka Hadlay Siday U Arkaan Xidhiidh Wadamada Carbeed la Samaysanayaan Israaiil
October 19, 2020 | Published by: yaska Afhayeenka Daacish Abu Hamza al-Quraishi ayaa cod muuqaal ah oo lasoo dhigay barta Telegram waxa uu ku sheegay in heshiisyada lala galay dalka Yahuudda uu la macno yahay “qiyaameyn lagu sameeyey” Islaamka. Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa labadaba xulufo la ah Saudi Arabia, oo weli aan xidhiidh diblomaasiyeed oo rasmi ah la yeelan Israel. Sacuudiga waxay sheegeen in xiriir ay la yeeshaan Israel uu ku xiran yahay in la helo dal ay leeyihiin Falastiiniyiinta, inkasta oo la rumeysan yahay inuu xidhiidhhoose ka dhaxeeyo. Afhayeenka Daacish ayaa dagaal-yahanada kooxdiisa iyo Musliimnta kale ugu baaqay inay weeraro ka dhan ah reer galbeedka ka fuliyaan boqortooyada Sacuudiga oo ay ku yaalaan labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka. Waxa uu sidoo kale ku baaqay inay beegsadaan dhuumaha shidaalka ee dalkaas. Waxa uu sheegay in Sacuudiga ay taageereen xiriirka Bahrain iyo Imaaraadka la yeesheen Israel ayaga oo hawada dalkaas u furay diyaaradaha Israel ee ku socda dalalka Khaliijka ee deriska la ah. LA WADAAG ASXAABTAADA
Sarkaal ka tirsan ilaalada Taliyaha Ciidamada Booliska oo lagu dilay Muqdisho (Faahfaahin)
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada ilaalada Taliyaha Booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu dilay Magaalada Muqdisho. Sarkaalka toogashada lagu dilay ayaa lagu magacaabaa L/Xiddigle Aadan Ibraahim Shamiindo, waxaana dilkiisa geystay askari kale oo boolis ah oo isna ka tirsan ilaalada Taliyaha Ciidamada Booliska Gen. Cabdi Xasan Maxmaed (Xijaar), kaasoo la sheegay inuu baxsadya markii uu dilka geystay. Ad Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Taliska ciidamada Booliska oo ku saabsan falka dilka ah ee ka dhacay Guriga Taliyaha ciidamada Booliska. Warar Xul ah
Daawo: Qaabkii La Yaabla lahaa Ee Madaxwayne Biixi Loogu Soo Dhaweeyay Magaalada Burco
Siyaasi Yuisuf Garaad oo Fariin Muhiim ah u diray Xukuumadda Rw Rooble
Muqdisho (OWN) – Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar oo war qoraal ah soo saaray ayaa farrin cajiib ah u diray xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Garaad oo qoraalkan soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-giisa ayaa marka hore tusaale u soo qaatay sawir ay ku jiraan sagaal wasiir oo ka mid ahaa xukuumaddii hore sidoo kalena uu ku jiro isaga, kuwaas oo qaarkood ay dhinteen, kuwana laga saaray golaha, halka kuwa kalena ay xukuumadda ka tirsanaayeen illaa laga rido. Yuusuf Garaad ayaa yidhi” Xusuus keliya ma aha ee mar kasta oo aan masawirkan eego wuxuu igu dhaliyaa feker hor leh. Wuxuu i taabsiiyaa sida marka aan qorshe sameysaneyno aan u moog nahay tan Rabbi.” Sidoo kale wuxuu ugu baaqay wasiirada cusub ee imaan doono in aysan noqon qorshe la’aan, islamarkaana ay muhiim tahay in la yimaadeen qorshe guud oo dan u ah dalka. “Haddii uu magacaagu ka soo dhex muuqdo Golaha Cusub ee la sugayo, qorshe la’aan ha noqon. Laakiin qorshahaagu yaanuu ku koobnaan sida aad jeclaan lahayd oo keliya,” ayuu markale yiri hadal yaqaan Yuusuf Garaad Cumar. Halkan hoose ka aqriso:- Waa 2017. Waa sagaal Wasiir oo garbaha isku haya oo ka mid ah Xukuumad uu markaa uun Baarlamaanku kalsooni siiyay laguna hor dhaarinayo. Xusuus keliya ma aha ee mar kasta oo aan masawirkan eego wuxuu igu dhaliyaa feker hor leh. Wuxuu i taabsiiyaa sida marka aan qorshe sameysaneyno aan u moog nahay tan Rabbi. Sagaalka Wasiir ee sawirka ka muuqda, saddex ka mid ahi waa ay geeriyoodeen. Allah ha u naxariisto. Saddex waa laga saaray Golaha. Saddexna waxay ka mid noqdeen Xukuumaddii uu Baarlamaanku kalsoonida kala noqday Bartamihii 2020, iyaga oo kala qeybsan oo qaarna ay ridayaan Golihii ay ka tirsanaayeen, qaar laga tiro batayna ay is leeyihiin daafaca. Sagaalka Wasiir ee garbaha isku hayay, ku socday qorshaha Xukuumaddu, dariiqyada aan qaar ka soo noqoshada lahayn ee ay mareen, midna kuma fekereyn maalintaas. Haddii uu magacaagu ka soo dhex muuqdo Golaha Cusub ee la sugayo, qorshe la’aan ha noqon. Laakiin qorshahaagu yaanuu ku koobnaan sida aad jeclaan lahayd oo keliya.
Dawlada Baxrayn oo Noqotay Wadankii Afraad oo Heshiis dhamaystiran la Yeesha Yuhuuda
October 19, 2020 | Published by: yaska Heshiiska oo Mareykanka uu gadhwadeen ka yahay ayaa lagu saxiixay caasimadda Baxreyn, ee Manama, maalinkii Axadda. Muddo tobanaan sano ah, dowladaha carabta badankood waxay qaadaceen Israel, iyagoo ku adkeysanaya inay dhisi doonaan oo kaliya xiriirkooda kadib markii la xaliyay khilaafka Falastiin Baxrayn hadda waa waddankii afaraad ee carbeed ee bariga dhexe kadib markii dalalka sida Imaraadka carabta, Masar iyo Urdun ay aqoonsadeen Israel tan iyo aasaaskeedii 1948. Xidhiidhadan diblomaasiyadeed ayaa waxaa cambaareeyay Falastiiniyiinta , waxayna ku tilmaamen mid dhabar jebin ah.Munaasabad ka dhacday Manama fiidnimadii Axada. Baxrayn iyo saraakiisha Israel waxay kala saxiixdeen xidhiidh diblomaasiyadeed oo buuxa. Labada dalna waxaa hadda la filayaa inay dib u furaan safaaraddo. Warbaahinta Israel ayaa tabisay in dukumiintiga aysan ku jirin wax tix-raac ah oo ku saabsan khilaafka Israa’iil iyo Falastiin. Wasiirka Arimaha Dibada Baxrayn Abdullatif bin Rashid Al-Zayani ayaa khudbad uu jeediyay ku sheegay inuu rajaynayo “iskaashi miro dhal ah oo dhinac walba ah in uu dhexmaro labada dal.” Wuxuu sidoo kale ku baaqay nabadda gobolka oo ay ka mid tahay in laba dowladood ahaan loo xaliyo khilaafka Falastiin. Kooxda Israa’iil waxay raceen dulimaad nooca El Al 973 – iyadoo loo tix-raacayo lambarka wicitaanka caalamiga ah ee Baxrayn – waxayna sii mareen hawada Sacuudi Carabiya iyagoo ruqsad gaar ah ka haysta boqortooyada. Hogaamiyaasha Sacuudiga ayaa ilaa iyo hadda diidan baaqyada in dib u soo celiyaan xiriirka Israel. Wasaaradda arrimaha dibedda ee Falastiin ayaa dib ugu yeertay safiirkeedii u joogay Baxreyn kadib markii heshiiska lagu dhawaaqay bishii hore, bayaan ka soo baxay hoggaanka Falastiin ay waxaa lagu sheegay “dhibaatada weyn ee ay u geysaneyso xuquuqda qaran ee lama taabtaanka ah ee shacabka Falastiin “. Israa’iil iyo waddamada carabta ee ku yalla Bariga Dhexe iyo Waqoyiga Afrika waxaa ka dhaxeeyey colaad taariikhi ah wixi ka dambeeyey marki ay Israa’iil aasaasantay 1948-kii, Waxaana muddo kaddib Israa’iil heshiis la galay Masar 1979-kii iyo Urdun oo 1994-kii, iyada oo labada dhinacba ay dalka Iiraan u arkaan mid khatar ku ah gobolka LA WADAAG ASXAABTAADA
Juventus Oo Qorshe Cusub U Bandhigtay Weeraryahankooda Paulo Dybala Xilli Laacibka Uu Bixiyay Jawaab
Kooxda Juventus ayaa diyaar u ah in waqti badan ay weeraryahankooda Dybala ku sii hayaan kooxda marwada duqoowday Sida Clacio Mercato qoreyso , Juve aya wadda qorshe ay hishiis cusub ugu saxiixaneyso laacibkaas oo ay u arkaan mid muhiim ka ah shaxda kooxda Hishiiska haatan ee wiilkaas reer Argentina waxa uu dhacayaa xagaaga 2022-ka balse Juve ayaa dooneysa in ay laba sano dheeraad ah ay ugu daraan Wadahadallo todobaadyo socday ka dib , Juve waxa ay Paulo Dybala ku war giliyeen hindisahaas hishiis kordhinta waliba lagu dhawaaqayo waqti dhaw Balse sida wargeyskaas uu sheegayo , Paulo Dybala ayaa codsaday in la siiyo waqti kooban oo uu si fog ula tasho wakiilkiisa ka hor inta uusan ogalaan kordhinta hishiiskiisa Share this:
Ronald Koeman Oo Xaqiijiyay Wakhtiga Ay Barcelona La Soo Saxiixan DOonto Memphis Depay.
Tababaraha Kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa xaqiijiyay in ay kooxdiisu la soo saxiixan doonto xiddiga Memphis Depay marka la gaadho suuqa January kadib markii ay seegeen saxiixiisa suuqii xagaaga. Xiddiga ayaa xaqiijiyay in uu heshiis la gaadhay kooxda Barcelona ka hor intii uu heshiisku bur-buray oo la dhamaystiri kari waayay. Koeman ayaa rajaynayay in uu la soo saxiixado xiddiga reer Holland si uu ugu badalo Luis Suarez kaas oo ka tagay kooxda. “Waxa jirta suurtagalnimo la hubo, Haa”ayuu Koeman u sheegay wargays reer Holland ah. “Waxa aan isku dayi doonaa in aan la soo saxiixdo Depay suuqa Janaury sababta oo ah waxa aan doonayaa in uu ka mid ahaado kooxdayda”. “Kaliya haatan waa in aan sugno, Depay waxa uu doonayay in uu halkan yimaado aniguna waan doonayay sababta oo ah waxa uu leeyahay tayo gaar ah”ayuu hadalkiisa sii raaciyay. “Haatan wax intaas ka badan ma odhan karo waa in aan eegno xaalada dhaqaale ee kooxda marka la gaadho January kadib waan eegi doonaa waxa xiga”. Share this:
Real Madrid Oo Loo Sheegay In Uu Isco Isaga Tagi Doono Kooxda & Gareth Bale Oo Sabab U Noqon Kara.
Isco ayaa ciyaaray kulankii Cadiz ee ay Real Madrid guuldarada la kulantay horyaalka La Liga laakiin xiddiga reer Spain ayaan kulamo badan ciyaarin sabab la xidhiidha in uu ku dhibaatooday in uu qaab ciyaareed fiican oo joogto ah soo bandhigo. Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaana aaminsan in uu Isco dooran doono in uu isaga tago kooxda si uu u raadsado koox uu joogto ugu ciyaaro. Rivaldo ayaa sheegay in uu Isco tusaale u qaadan karo xiddiga James Rodriguez kaas oo wacdaro ka dhigaya si joogto ahna ugu ciyaara kooxda Everton. “Isco waxa uu wakhti fiican ku soo qaatay Real Madrid, waxa uu wakhti muhiim u ahaa kooxda laakiin haatan arintaas kuma dhacayso haatan”ayuu Rivaldo Yidhi. “Waxa laga ayaabaa in uu eego xaalada James Rodriguez kadib tusaale ka dhigto isagana tago kooxda Real Madrid marka uu furmo suuqa kale”. “Xiddiga reer Colombia waxa uu ku jiraa wakhti fiican mana yaabi doono hadii uu Isco wadadaas oo kale maro”. “Isco haatan waxa uu daawanayaa James waxana uu ogyahay in uu ku faraxsanyahay go’aankii uu kaga tagay Real Madrid waliba uu helay koox uu joogto ugu ciyaaro”. “Isco ayaana mari kara wadadaas oo kale hadii uuna Zidane siin fursado fiican”. Sii Akhriso: Ciidamo Badan Oo Ka Tirsan Kuwa Gaarka U Tababaran Ee Dawlada Federaalka Somaliya Oo Loo Daad-Gureeyay Magaalada Jowhar + Sabab.